MPANAO GAZETY NOHADIADIANA
Omaly no nanomboka nohenoina ny mpitory ireo mpanao gazety izay manohana ny K 25, miaraka amin’ny mpampiasa azy ireo ary koa ny kandidà nanohana.
Tsy iza izany fa ny tompon’andraikitra miadidy ny lalàna eo anivon’ny primatiora. Tsy mbola voatery ato ho ato arak’izany no mipoitra eny anivon’ny borigady manokana misahana ny heloka bevava ireo voakasiky ny raharaha fitaomana olona hiaro ny marina teny amin’ny 13 mai izay nivadika ho fanohitohinana ny filaminana anatiny ny fijerin’i Mahazoarivo azy.
Tsy ho mari-toerana mihitsy ny filoha vaovao izay lany eo hoy ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka na ny Seces. Ankavitsian'ny vahoaka malagasy ihany no nifidy azy ka sarotra ny hahamarin-toerana azy. Raha ohatra kosa ka mifandamina amin'ny mpanao politika sy manao fampihavanam-pirenena ilay filoha dia ho azony antoka ny toerany, raha tsy izany dia roa taona ihabny dia hihozongozona indray.
NAKATONA NY SEKOLY
Voatery nanidy sekoly sy nampody ireo mpianatra ireo sekoly teny amin'ny manodidina an'Ambohidahy omaly tolakandro. Ho fiarovana ny ain'ireo mpianatra raha sanatria ka misy korontana ity fepetra noraisina ity. Misy amin'ireo ray aman-dreny no tsy afaka naka ny zanany ka notazomina tao am-pianarana ihany. Niteraka savorovoro ara-tsaina ho an’ny ray aman-dreny izany omaly satria ny atoandro vao niantso ny tompon’andraikitry ny sekoly manoloana ilay fepetra.
Orana artifisaly no nilatsaka teto an-drenivohitra hatramin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Izany dia mba entina hampiodinana ny milin’ny Jirama izay manana olana noho ny hain-tany. Amin’ny lafiny iray anefa dia lasa ihany ny sain’ny olona sao mba misy hifandraisany amin’ny vanim-potoana politika izay misy amin’izao fotoana izany. Isan’ny nandrava ny firaisan-kinan’ny mpitolona tetsy amin’ny 13 mey mantsy ny orana tato ho ato.
Raikitra indray ny fifampitifirana teny amin’ny lalam-pirenena fahefatra. Teo amin’ny PK115 no nisy nanakana ny taxi-brousse izay hihazo an’i Mahajanga raha avy eto Tanà. Dimy lahy no nivoaka tao anatin’ny haizina ary nitifitra tamin’ny basim-borona sy MAS 36. Soa fa nisy zandary roa izay nanaraka ilay fiara fitaterana ary ireo no nifampitifitra avy hatrany tamin’ireo olon-dratsy. Rifatra nitsoaka ireo olon-dratsy ary mba tsy nisy ny aina nafoy na ny naratra tamin’ny mpandeha.
DAHALO NAMONO OLONA
Olona efatra indray no matin’ny dahalo tany Malaimbandy. Miisa 50 ireo olon-dratsy no nanafika tao amin’ny kaominina Androtsy ary sady nitifitra no nikapa tamin’ny famaky ireo olona tao an-tanàna. Miisa 16 ny basim-borona izay nampiasain’ireo ary mbola niampy sabatra sy lefona izany. Tezitra tanteraka no sady mihorohoro ny olona an-toerana ankehitriny satria mihoatra ny loha loatra ny sangin’ireto olon-dratsy izay samy mpiray tanindrazana ihany.
Ny olona indray no sady nisambotra no nanao fanadihadiana tao Maevatanàna. Izany dia nandritry ny asan-dahalo izay nitranga tao amin’ny fokontany Marokoro. Dahalo am-polony maro no nanafika saingy efa nivonona ny fokonolona ary nihemotra ihany ireo rehefa nandeha ny fifampitifirana. Nisy iray izay azo sambo-belona ka io no nanaovan’ny olona fanadihadiana ary nanoro ny namany roa. Naterina teny amin’ny zandary ireo dahalo telo lahy fa mba tsy novonoina.